Xildhibaan Fiqi “Gabre Shaqadiisi, iyadoo billaa Gabre ah ayay dalka ka socotaa” - Awdinle Online
Xildhibaan Fiqi “Gabre Shaqadiisi, iyadoo billaa Gabre ah ayay dalka ka socotaa”
December 1, 2019 (Awdinle Online) – Qoraal uu bartiisa Facebook ku qoray ayuu si weyn uga hadlay dhaq dhaqaaqyada Itoobiya Axmed Macalin Fiqi oo ah xildhiban ka tirsan barlamanka somaliya wuxuuna si weyn u mucaarada dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ayaa is barbar dhig ku sameeyay faragelinta Itoobiya ee shalay, xilligii uu dalka joogay Gen. Gabre iyo haatan, isagoo xusay in haddii Gabre dalka laga eryay ay shaqadiisa si ka duwan sidii hore uga socoto dalka.
Axmed Fiqi ayaa sheegay in shaqadii gabre ka waday dalka ay weli ka socoto, iyadoo billaa Gabre ah, isagoo is weydiiyay in haddii uu dhashay Gabre-Soomaali ah oo ka shaqo badan kii hore sida uu yiri.
Waxyaalaha madaxweyne Farmaajo uu ku faani jirey sanadkii 2017-kii waxaa ka mid aheyd in Gabre uu dalka ka eryey! Gabre dhiigyacab Macruuf ah oo danbiyo dagaal dalkaan ka geystey ayuu ahaa.. Eryid ka badan ayuu astaahiley laakin tallaabo wanaagsan ayey aheyd taas lafteedu.
Balse shaqadii Gabre Bilaa Gabre ayey Soomaaliya ka socotaa ee hala ii weydiiyo madaxweynaha shaqadaan yaa wada? Ma Gabre-Somali ayaa noo dhashay ka shaqo iyo xaasidnimo badan kii Itoobiyaanka ahaa?
Gabrihii Itoobiyaanka ahaa mudadii uu joogay muwaadin Soomaaliyeed dalka lagama dhoofin, doorashooyinka dawlad goboleedyada ciidamo itoobiyaan ah oo faragelin ku sameeya uma diri jirin, musharixiin tartamaysa midkoodna sooma xiri jirin, intaas waxaa dheer afkiisa lagama maqli jirin labada dal ayaa la isku darayaa ama dekedo ayaan rabnaa balse Gabre-Soomaali waxaas oo dhan waa u xalaal! Haddaba Gabre-Itoobiye waa baxey laakin xafiiskiisii weli shaqooyinkii waa wadaa weliba ayagoo ka baaxad weyn kuwii hore.
Gabrihii hore marka hawshiisa la dhaleeceeyo cidna ma jawaabi jirin hadda Gabraha cusub waxaa jawaabaya Villa Somalia, xildhibaanno iyo qaaqlayaal markii horeba u shaqeyn jirey Gabrihii hore.
Waxaa ayaandarro weyn in ciidamada qaranka oo dhisme ku jira in la tusiyo in ay ka burji iyo xoog weyn yihiin ciidamo ajnabi ah, oo lagu aamini waayo hawl amni oo ay ku filan yihiin in loo wacdo ciidamo Itoobiyaan ah oo aan wax itaal ah dheereyn, haddii kumandoostii, Booliskii iyo mileterigii Soomaaliya hal magaalo (Dh-mareeb) oo nabad ah amnigeeda lagu aamini waayey waxaan garan la’ahey meesha lagu aamini karo oo kale?
Previous articleAl-Shabaab iyo ciidamada dowladda oo Dagaal culus ku dhex maray Gobolka Gedo
Next articleAbiy Ahmed Oo Laga Eedeyay Faragelin Siyaasaded Oo Ku Hayo Dalalka Deriska La Ah Itoobiya.